Arsivan'ny mozika mivantana - IntoKildare
Trano ho an'i Christy Moore, Damien Rice, Planxty ary Bell X1, Kildare dia azo antoka fa hanome fety ho an'ny sofina.
Avy amin'ny mozika Irlandey nentim-paharazana ao amin'ny trano fisotroana kafe mahafinaritra ka hatramin'ny seho an-tsehatra mivantana, andrana mozika mivantana iray mivaingana ary fiandrasana alina mahafinaritra no andrasana.
Trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana voaravaka haitraitra 1920 izay manome traikefa mahandro isan-karazany.
Ny menus manondraka vava nomanin'ny mpahandro ambony, natolotra tamina endrika milay sy milamina avy amin'ny ekipa iray izay tena miahy.
Mpitsara Roy Beans
Sakafo Amerikanina sy Tex-Mex mahafinaritra, soatoavina sarobidy ary serivisy fisakaizana miaraka amin'ny labiera sy labiera fanaovana asa-tanana miaraka amina mozika velona.
Fisotroana mivantana eo afovoan'i Newbridge miaraka amina seho mozika mivantana sy hetsika ara-panatanjahantena lehibe rehetra eo amin'ny efijery lehibe.